Brendan Rodgers oo kaga digay Manchester United inay dib u dhigto heshiiska Harry Maguire – Gool FM
(England) 18 Luulyo 2019. Tababaraha kooxda Leicester City ee Brendan Rodgers ayaa sheegay inuusan aqbali doonin fikradda ah in Manchester United ay sii wadi doonto raacdada ay ugu jirto adeega daafaca reer England ee Harry Maguire ilaa iyo dhamaadka suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Manchester United ayaa dalab 70 milyan oo ginni ah ku dalbatay inay ku dhameystirto heshiiska Harry Maguire, balse kooxda Leicester City ayaa iska diiday.
Si la mid ah waxaa adeega Harry Maguire xiiseeneysa kooxda Manchester City, balse Red Devils ayaa si xoogan u xiiseeneysa dhameystirka heshiiska laacibkan.
Hadaba macalinka kooxda Leicester City Brendan Rodgers ayaa sheegay:
“Waxaan maqlay warar badan oo ku saabsan ka tagista Harry Maguire ee kooxda Leicester City, laakiin marnaba ma gaarin marxalada heer aad u sareeya”.
“Waxaa jiray laba dalab oo ka yimid koox kasta, islamarkaana waa la diiday sababtoo ah ma ahayn dalabyada aan dooneenay inaan ku iibino ciyaaryahanka”.
“Ma iibin doono ciyaaryahanka ilaa iyo aan ka heli doono dalab ku haboon ee aan ku iibin karno, xaqiiqdii waxaa jiri doona fasax, mana difaaci karno nafteena, ilaa iyo inta ay jiraan bartilmaameedyada xageena ah ee suuqa kala iibsiga”.